पूर्वयुवराज पारस शाह यी युबतिको प्रेममा पागल थिए, यसरी टुट्यो सम्बन्ध ! – Sunaulo Nepal TV
काठमाडौं । पूर्वयुवराज पारस शाह कुनै समय थाइल्याण्डमा बस्थे। उक्त समयमा पारस र उनको परिवारबीच फाटो आएको थियो। यसो त उक्त समयमा पारस र उनकी पत्नी हिमानी शाहबीच सम्बन्धमा देखा परेको खाडल अहिले पनि पुरिएको छैन। तर पारस अहिले नेपालमै बस्न थालेका छन्। उनी सामान्य नागरिकका रुपमा बाँचिरहेका छन्।
पूर्वयुवराज पारसको विवादको लामो शृङ्खलाहरु छन्। उनी थाइल्याण्डमै हुँदा पनि ड्र,ग्स प्र,क,र,णमा प्रक्राउ परेका थिए। थाईल्याण्डमा रहँदा पारस एक सामान्य मोडल कन्निका चैयासर्नसँग प्रेममा थिए।कन्निकाको सो समयमा एक छोरो भइसकेको थियो। उनी उतैका मोडल तथा व्यवसायी प्याट्रिकसँग प्रेममा थिइन्। उनीहरुले विवाह नै नगरी २००९ मा छोरो जन्माएकी हुन्।
तर त्यसको ३ महिनापछि नै कन्निकाले प्याट्रिकलाई छाड्ने निर्णय गरेकी थिइन्। छाड्ने निर्णय गरेको बताइएकी थिइन्। त्यसै समयमा पारस र कन्निकाको भेट कुनै इभेन्टमा भएको हुुन सक्ने अनुमान गरिन्छ।
सन् २०१५ मा नेपाल फर्किनुअघिसँगै पारस कन्निकासँगै बस्थे। त्यतिमात्र हैन उनी कन्निकालाई नेपाल लिएर आउने तयारीमा थिए। तर राजपरिवारले त्यो अनुमति नदिएपछि उनी नेपाल आए।
पारस नेपाल आएपछि सामाजिक कन्निका सामाजिक सञ्जालमा एक्टिभ रहन थालिन्। उनी विवादस्पद पोष्टहरु गर्ने गर्थिन्। कहिले पारसलाई छोरासँग जोडेर हिमानीमाथि जाई लागेर उनले सामाजिक सञ्जालमा लेख्थिन्। एकपटक उनले हिमानीलाई अ,श्,ली,ल गाली गर्दै यो केटी कोे हो भनेर फोटो पनि पोष्ट गरेककी थिइन्।
कन्निकाको यस्तो व्यवहारबाट पारस आफैं उनीबाट टाढिएको बताइन्छ। कन्निकाले अर्को एकपटक पारसपत्नी हिमानी शाहलाई ट्रोल गरिएको एउटा तस्वीर फेसबुकमा अपलोड गरेकी थिइन्। त्यसपछि नेपालमा उनको चर्को आलोचना भएको थियो।
Previous आफ्नै छोरीलाई क रणी गरेको आ रोपमा नेपाली सेनाका जम्दार प क्राउ,अन्य छोराछोरी भन्छन् बुबा निर्दोष हुनुन्छ (भिडियो हेर्नुस्)
Next यिनै हुन् डीआईजी रञ्जितकारको नाम लिएर लाखौंको डिल गर्ने महिला ? डीआईजी सँगको सम्बन्ध के ?